TDK Ikike nkesa maka Inductor | Circuit Ocean Int 'Co. - Tantalum Capacitor nkesa Kemet AVX
TDK Capacitors, TDK ferrite chaplet, TDK Inductor
Categories: 1. Tantalum Capacitors & SMD Capacitors MLCC, TDK Capacitors, TDK ferrite chaplet, TDK Inductor
TDK Ikike nkesa maka Indctor | Circuit Ocean Int Co.
Circuit Ocean International bụ Authorized nkesa nke TDK na Hongkong na South China mpaghara. Mr.Roy Wong bụ anyị ngwaahịa etinyere anụ ụlọ nri nke a ika, Na South China Area anyị nwere enyemaka - "Shenzhen Lihai Electronic Company" .Anyi na-mgbe na ngwaahịa nke 5,000,000 $ uru mgbe Samsung SMD Capacitor / MLCC item.We wildely ere ka ndị ọzọ a ma ama EMS / OEM ahịa dị ka Sichuan CHANGHONG Electric CO., LTD , TCL ngosi technology (HUIZHOU) CO., Ltd., CHENZHOU GOSPELL Digital Technology CO., LTD. Anyị na-na-enye Samsung Electro-arụzi ụgbọala nkesa na obodo na ọbụna Korea. Anyị nwere kpọmkwem sales windo electronic Market specilized maka Samsung SMD Capacitors.
Anyị nwekwara dị na-enye TDK Inductor item si ukara ọwa, na na-na nnukwu ego nke ngwaahịa TDK Inductor item, Ọ bụla akụrụngwa ike isi iyi azụ mbụ emeputa.
Gịnị mere ndị mmadụ ịzụta TDK Inductor ngwaahịa si Circuit Ocean Company?
ase na TDK Inductor / TDK ike inductor/ TDK Common Mode ịkpagbu site click esonụ girl "kọntaktị ụdị" ma ọ bụ email na sales@tantalum-caps.com
Reference nke TDK ụlọ ọrụ:
TDK Corporation (Tokyo Denkikagaku Kogyo) e guzobere December 1935 na ebumnuche nke na-aghọ ụwa mbụ azụmahịa emeputa nke magnetik ihe ferrite. TDK, kemgbe ahụ, anọgidewo ceaselessly na-esi a dịgasị iche iche nke ngwaahịa na ọrụ na-eji nke ya ihe technology, N'ịgbakwasị on ferrite na egbuke, na nhazi technology, nke na-adọrọ na-Njirimara nke ihe na-kacha ogo. The okobot mmụọ nke TDK, "na-eme ka omenala na ụlọ ọrụ site creativity," na-aga n'ihu nke a ụbọchị pulsate ofụri ụlọ ọrụ.
Ọ dị mma izute gị! M ihe inductor, otu n'ime electronic components.You nwere ike ịnọ na-eche ihe kpọmkwem electronic mmiri bụ. N'ezie ha dị oké mkpa ihe n'ihi na kọmputa ngwaọrụ ọtụtụ ndị na-eji na cell phones, PC si, TV tent, game igwe, na na na-mejupụtara latrik. N'etiti ha, inductors bụ otu ìgwè nke na-arụsi ọrụ, na-arụ a dịgasị iche iche nke ihe aga-eme-anyị na-na-busier na busier na biakwa obibia nke ubiquitous ọha mmadụ na nke ndị mmadụ pụrụ mfe nweta a uka nke ozi n'oge ọ bụla na n'ebe ọ bụla. Ugbu a, ka m na-ịme ndị òtù anyị inductor ụwa na-akọwa ihe ndị magburu onwe ọrụ ha na-eme!
An inductor bụ n'ezie aha ozo a eriri igwe. Inductors-mara dị ka ndị dị otú ahụ n'ihi na, iji a technical okwu, ha nwere inductive Njirimara. Bu, na ọ nwere ike na-hụrụ na mgbe ihe eletrik aga site a eriri igwe, ọ na-arụpụta a magnetik Gịnị n'ezie bụ ihe inductor? ubi; ma ọ bụ mgbe a ndọta-agabiga a eriri igwe, ọ na-arụpụta ihe eletrik.
A eriri igwe bụ a ogologo waya na-emerụ na na gburugburu, ọtụtụ ọtụtụ ibe. An eletrik eru site na eriri igwe nwere ike ndọta edoghi dị nnọọ ka a magnet.
Mgbe a magnet na-akpali azụ na-apụta site na a eriri igwe, ihe eletrik aga site na eriri igwe. Nke a bụ n'ihi na eriri igwe na-eme ka ihe eletrik nke mere na ọ nwere ike na-emepụta ihe megidere ndọta ịgbagha ndọta-emepụta site na magnet.
More ndọta edoghi na-emepụta mgbe a isi na-etinye n'ime a eriri igwe. Nke a bụ n'ihi na ndị isi nwere ike itinye uche na ndọta e. The ike nke na-amị ndọta edoghi na-ezo dị ka inductance (L). TDK si ọpụrụiche bụ ịzụlite isi ihe na-enwe ibu magnetik permeability (μ), ya bụ, ihe na ike itinye uche ọzọ ndọta e.
Ọrụ nke inductors:
Ọrụ nke coils na-adabere na mgbaàmà frequencies. Nke a bụ n'ihi na elu ugboro ole, ndị na-erughị mfe mgbama aga.
Coils nwere ike na-echekwa eletriki ike na a ụdị nke magnetik ike iji ihe onwunwe na ihe eletrik eru site na a eriri igwe na-arụpụta a ndọta, nke n'aka nke na-arụpụta ihe eletrik. Ndị ọzọ okwu, coils enye a n'aka nke na-akpakọba ike na ndabere nke inductivity (reactive magnetik agbanwe oge).
Voltaji nduzi converters na-Nọsi'ike mgbe eji na Nchikota na inductors na ike na-echekwa magnetik ike, capacitors na ike na-echekwa electric ume, na a mgba ọkụ
Iche iche na ụdị inductors:
Signal inductors, waya-emerụ ụdị
Signal inductors bụ isi TDK inductors. Ha nwere obere nnyefe ọnwụ (ala na-eguzogide), featuring a buru ibu ugbu a-njikwa ike na elu ziri ezi (warara ndidi), si otú na-enye a ọgaranya lineup na pụrụ imeju nkọwa nke anyị ahịa.
Signal inductors, multilayer ụdị
Ọ bụ TDK onye mepụtara ụwa mbụ inductors enweghị asọfe. TDK nwekwara mepụtara elu ugboro iko seramiiki inductors na ala-na-nnyefe ọnwụ "Gigaspiral multilayer Structure."
Power inductors, waya-emerụ ụdị
TDK mepụtara ike pụrụ iche inductors dabeere na a ọhụrụ e mere pụrụ iche Ọdịdị, ebe a drum isi na-sandwiched abụọ V-ekara cores, si otú ọma ọbọ a nnukwu ugbu a ike na Mbelata ke calorific ọnwụ.
Noise suppression mmiri, na mkpa-film ụdị
TDK ka azụmahịa mkpa-film nkịtị mode nzacha izute ina nta ma thinner kọmputa ngwaọrụ, akpụ mkpa-film nke elu agbanwe oge njupụta ferrite ihe na elu-mkpebi ụkpụrụ mkpa film coils na ndabere nke ala-nke-na-art nanotechnology
Family nke inductors maka dị iche iche ngwa